Qotomiyey Back to My Mac iyo Back to My Mac lagu bedelan karo
Top 10 Back to My Mac lagu bedelan karo
Back to My Mac waa cusub iCloud helaan desktop socda Mac OS X Lion (10.7.5) ama cusub, si ay u oggolaadaan fog ka muuqatay. Waxa uu isticmaalaa bonjour Wide-Aagga ammaan ogaado adeegyada internet-ka iyo si toos ah reserved ad hoc, on-baahida, dhibic-dhibic Windows XP xidhiidhada u dhexeeya kombiyuutarada isticmaalaya IPsec.
Qaybta 1. Calan Back to My Mac
Qaybta 2. Sida loo Back Isticmaal si My kaabta
Qaybta 3. Back to My Mac Badeli kara ee Windows
Qaybta 4. Back to My Mac Badeli kara ee macruufka
Si aad qotomisay Back to My Mac, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay waxyaalaha soo socda:
Laba ama in ka badan Mac kombiyuutarada oo isticmaalaya xisaab isla iCloud on OS X Lion (version 10.7.5) ama cusub.
An v7.6.1 saldhig saldhigga garoonka diyaaradaha ama ka dib (Airport ba'an, garoonka diyaaradaha Express, ama garoonka diyaaradaha Time kaabsal) ama wax kasta oo kale oo router internet taageeraya UPnP ama NAT-PMP la firmware ugu dambeeyay.
Garoonka Utility (version 6.3) ama ka dib.
A internet 300Kbps ama dhaqso bi-jiho u dhexeeya kombiyuutarada ee la wadaago shaashadda.
Brannmur A u ogolaanaya fog la xidhiidha. Firewalls Qaar ka mid ah xannibi qaarkood Back to My Mac xiriir.
A Mac OS la dheereeyey (Journaled) USB formatted drive waxaa looga baahan yahay in ay isticmaalaan garoonka ba'an ama garoonka diyaaradaha Time kaabsal si ay u helaan drive dibadda. Marka waxaa loo isticmaalaa la Back to My Back, drive adag muuqan doonaa sida saldhiga ku hoos Wadaago galeeysid Finder ka.
Si aad u billowdo, waxaad u baahan tahay in la dhiso Back to My Mac on computer kasta oo aad u baahan tahay.
Tag rabtid System ka Menu Apple oo guji iCloud .
Gal iCloud la ID Apple aad.
Dooro Back to My Mac .
Raac tilmaamaha oo iyadoo calan kor u muujisay soo socda si ay u soo laabto waxa aan Back .
Calan u Security fursadaha.
Calan u Security Options.
Back to My Back isticmaala isgaarsiinta aamin IPSec iyo sir SSL dhexeeya Macs iyo Back to My Mac, iyo dijital shahaado Kerberos loo xaqiijiyo aqoonsiga. Iyadoo Kerberos, uma baahnid inaad si loo sii galaya aqoonsiga mar walba in ay ku xidhmaan. Doorasho ammaanka ay u baahan yihiin tallaabooyinka soo socda.
1. Calan Passwords Strong
Calan sirta xoog leh xisaabaadka user in ay sii sirta ammaan ah.
2. U baahan Password ah
Shid fursad u baahan tahay sirta ah ee dhammaan kombiyuutarada ee network Mac si ay u bilaabaan, iyaga hurdada ka hurdo ama baxdo screensaver ah. Tallaabooyinka ah in la raaco waa:
Tag rabtid System oo guji Security & Privacy .
Dooro baahan password isla markiiba ka dib hurdo ama screen baado bilaabmin .
3. Lock Screen Gacanta
Calan Lock screen khiyaar oo dhan combiyuutarka ee Back in ay My network Mac. Tani waxay u ogolaaneysaa shaashadda si ay gacanta xirto ka hor dhamaadka fadhiga iyo helitaanka ayaa suuragal ah keliya mar baado shaashadda tagaa dib.
Si aad u dhigay shaashadda qufulka si ay u muujiyaan on desktop-ka,
Tag Access Key in codsiyada / Utilities.
Dooro rabtid guji General tab.
Dooro xaaladda keychain Show in bar menu . Icon padlock A u muuqataa in bar menu sare ee aad desktop-ka.
Riix Padlock icon iyo dooran Screen Lock inay gacanta xirto.
4. dami Automatic Login
Dami login si toos ah u dhan Macs saxiixay in iCloud si looga hortago in si fudud u helaan.
Dooro rabtid System ka menu oo guji Users & Groups .
Guji ku xir icon hoose ee suuqa kala.
Ku qor magaca maamulka iyo password, oo guji Unlock .
Kor icon qufulka, guji Login Options oo dhigay login Automatic in off.
Guji ku xir icon mar kale oo ay suuqa kala.
Ka dib markii u fidinno saldhig kasta saldhig Mac ama garoonka diyaaradaha, soo socota ay xiriir fog.
Dooro aad rabtid ka menu Finder oo guji galeeysid tab.
Dooro Back to My Mac qaybta la wadaago.
Fur suuqa kala Finder ah, fiiri qaybta wadaago galeeysid oo guji la wadaago ka dib markii in ka badan tilmaamaha erayga la wadaago.
Riix Connect Sida ka dib xulashada computer ama saldhig saldhigga laga hago in laga heli. Click All si aad u aragto oo dhan laga heli karaa kombiyuutarada Mac iyo saldhigyada saldhig.
Back to My Mac noqon karto off waqti kasta. Tan waxaa loo sameeyaa iyadoo la fogeynayo saldhigga Mac ama Airport saldhig ka Back in ay My network Mac.
Qaybta 2. Sida loo Back Isticmaal si My Mac
Back to My Mac kuu ogolaanayaa inaad si ay u helaan ah Mac ee adag drive iyo isku bedelasho faylasha internet wax ku xiran Mac OS X socda Lion (10.7.5) ama cusub ka. A feature qaybsiga screen ku yaal ayaa sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in la furo iyo edit files ee computer kale Mac, helaan makiinadaha kale ee network guriga adiga iyo geliyaan files muhiim ah in iCloud.com.
Si aan ku bilaabo, geli macluumaad iCloud on kasta oo ka mid ah kombiyuutarada Mac in lagugu xiro soo laabto waxa aan Mac, ka dibna ugu noqda Back to My feature Mac. Waxaad la keeneen in doonaa tallaabo in Xulasho Murayaad Sharing haddii aad rabto in aad dhaqaajiso dhisay-in adeegyada OS X sida Sharing File, Sharing Screen iyo Wake u Network Access.
Ka dib oo dhan kombiyuutarada ayaa soo qabanqaabinayay, waad kala qaybsan kartaan files raacaya tallaabooyinka soo socda:
Burcad Finder, dooran computer aad rabto in ay ku xidhmaan ka qaybta wadaago on bar Side ah.
Connect in Guest, diiwaangashan, User ID ama Isticmaalka Apple marka ay keentay in.
Marka xiran, suuqa kala Finder a furmay muujinaya dhammaan faylasha laga heli karaa on your computer fog.
Jiid oo hoos u file kasta oo aad rabto in aad ka kombiyuutarada fog fog si ay mid ka mid ah ee aad isticmaalaysid. File kala iibsiga ka bilaabi doona.
Xakamee Mac fog ah
Waxaad wadaagi karaan shaashada, jiirka iyo keyboard on Back to My mashiinada Mac xiran. Si tan loo sameeyo, raac tallaabooyinkan:
Burcad Finder iyo dooran Mac aad jeclaan lahayd in la xakameeyo.
Riix screen Share on xaq u sareeya. Tani waxay ku tusi doonaa image dhab ah waqtiga mishiinka fog.
Access files ka kaabsal Time
A Time kaabsal waa isku-dar ah saldhiga Wi-Fi iyo baabuur badan oo adag superfast. Sidoo kale waxay ka mid yihiin qalabka doorbido Time hayaan Machine. Helitaanka files via Back to my Mac u ogolaanaya in ay ka files badan oo muhiim u kaydiyaa hayaan ay helaan sahlan. Si Back to My Mac on kaabsal Time awood, raac tallaabooyinkan:
Burcad garoonka Utility oo guji garoonka diyaaradaha.
Guji Edit inay soo qaadaan Menu Doorashooyinka.
Riix ah (+) hoose ee ay tab Base Station, hoose macluumaadka oo dhan Back to my Mac ku saabsan.
Gal iCloud la aqoonsiga.
Marka kaabsal Time uu xiriir la iCloud, waxaa laga heli karaa sida kaliya ee kombiyuutarada kale. Waxaa la soo daabici doonaa dhanka bidix ku saabsan oo dhan Finder daaqadaha mustaqbalka hoos yaala qaybta la wadaago. Riix si aad u xirmaan oo ay wadaagaan faylasha sida aad u baahan tahay.
Beddelka soo laabto waxa aan Mac jira Windows. Hoos waxaa ku qoran ugu sareysa 5 kale oo si ee user rating, ka kale ugu fiican (# 1) in kale ugu xumaa (# 5). Barnaamijyada waxaa lagu qiimeeyo oo ku salaysan sida ugu sahlan ee ay tahay in ay isticmaalaan iyo sida ugu wanaagsan ee ay u shaqeeyaan marka la barbar dhigo soo laabto waxa aan Mac.
# 1 booska. LogMeIn Pro Shaqsiga (ilaa 2 Kombiyuutaro) $ 99 / Year
Quick oo si fudud u helaan kombiyuutarada fog
Si sahlan loogu kala oo ammaan ah ee files waaweyn
Share files aan ku lifaaqan email
Xiriir Quick kombiyuutaro fog oo aan browser internetka ah
Waraaqaha Print ku yaalla kombiyuutaro fog
Daawo videos HD oo geeyo audio
Platform jira Android iyo macruufka
Download halkan >>
Power Users (ilaa 5 kombiyuutarada) Power Users (ilaa 5 kombiyuutarada) $ 249 / Year
Ganacsiyada Yaryar (ilaa 10 kombiyuutarada) $ 449 / Year
# 2. TeamViewer Isticmaal Private Free
All-in-Mid ka mid ah xalka hago
Video Fast iyo kala iibsiga audio
Modules Customer si gaar ah loogu talagalay
Taageero mudnaanta 12 bilood
Heerka ugu sarreeya ammaanka
Rakibaadda oo ciidankii Free
Premium $ 1499
Corporate (3 barbar Kulanka) $ 2690
# 3. Saaxiib PocketCloud Windows Desktop PocketCloud Free
12 bilood Free (30 Maalmood)
$ 7.99 (3 bilood)
$ 23.99 (12 bilood)
Secure sugida VNC
Sugida calaamad Single
Easy iyo amaan kala iibsiga file
Channel taageero ka go'an
256-yara AES encryption
VNC siladda Plus $ 99
# 5. Splashtop Streamer Personal $1.99 / bishii
Taageero farsamo oo ka go'an
Multi-user helaan computer Configurable
Audit ka danbeeyaan si ay u taageeraan waafaqsanaanta
Helitaanka desktop Virtual
On Fikradu geeyo
Taageerada chromebook iyo chrome daalacashada
2-Factor HUBINTA (RSA)
Business $ 60 user sanadkiiba
Enterprise $ 100 user sanadkiiba
Fasalka $ 100 / idaaciga / sano
Kale oo badan oo ay u soo laabto waxa aan Mac jira macruufka. Hoos waxaa ku qoran ugu sareysa 5 kale oo si ee user rating, ka kale ugu fiican (# 1) in kale ugu xumaa (# 5). Barnaamijyada waxaa lagu qiimeeyo oo ku salaysan sida ugu sahlan ee ay tahay in ay isticmaalaan iyo sida ugu wanaagsan ee ay u shaqeeyaan marka la barbar dhigo Back to codsigeyga Mac;
# 1. LogMeIn ee macruufka
# 4. VNC siladda ee macruufka
# 5. Splashtop App
# 1 booska. LogMeIn Pro LogMeIn Free
Gacanta Easy iyo amaan ee PC ama Mac si toos ah uga iPad / iPhone
Save files si toos ah iPad / iPhone in ay ka shaqeeyaan offline
Files Access, muusig iyo sawiro iCloud
Ku lifaaq files, sawiro iyo videos in emails
Access iyo kala iibsiga photos dhexeeya app sawir ku iPad / iPhone iyo app LogMeIn ah
Cloud Bank links-dhexgalka in app LogMeIn
LogMeIn Kicinta $ 129
# 2. TeamViewer App TeamViewer taageero qalab mobile Free
Qalabka telefoonada gacanta ku hayaan Remote
Chat iyo in kantaroolku la heli karaa
Nidaamka jiid files log
Riix qoraalka in sabuurad qalabka mobile ee
Eeg liiska oo dhan barnaamijyadooda ku rakiban
Riix oo jiid goobaha Wi-Fi
# 3. PocketCloud App PocketCloud Pro app Free
Saddex fursadaha xiriir Easy
Interface user dareen
Touch tilmaamaha: saxnimada sare gacanta ku screen
Keyboard Custom furaha shaqo iyo gaaban cut
Taageero keyboard International
Key-guddiga kaakacaysa daadinayso
Text galo Multiline nuqul / awoodda Jinka
Nuqul / dhaji dhexeeya macruufka iyo Windows
# 4. RealVNC app VNC siladda ee macruufka Free
Gacanta ku dareen
Xaasidnimo mouse Easy
Entry text Simple
Qaraarada screen Sare
# 5. Splashtop Streamer Personal:
iPhone $ 2.99 (iPad / iPod)
$ 4.99 (iPhone)
View iyo file edit fog
Video Full iyo soo bandhigidda audio
Taageero bandhigay Apple isha
Simple log-in oo ku xirmaan
Play hab ciyaarta 3D
100% helaan waafaqsan in faylasha kombiyuutarada iyo barnaamijyada
Isticmaal browser desktop buuxa (IE, Chrome, Firefox)
A Full Tusaha iPhone kaabta si Mac
Talooyin si ay u gudbiyaan iPhone Music inay Mac
Nidaameed wax kasta ka iPhone si Mac
3 Siyaabaha dejinta Xiriirada ka iPhone si Mac
Bedelka Photos ka iPhone si Mac
Top 5 Software in Nadaafadda Mac
Top 3 Emulators Android u Mac
3 Siyaabaha Copy Video ka iPhone si Mac
Hordhac Full ku saabsan CleanMyMac
Wax walba oo ku saabsan Memory Nadiifi on Mac
Keyboard nadiif ah, Screen oo dheeraad ah oo ku Mac
Top 6 iPhone Explorer u Mac & Win PC
Nadiifi Mac: Waa maxay la nadiifin karo on Mac iyo sida loo nadiifi
10 Mobile Phone Data Recovery Software Best - hortag Data Loss
Apple iWork u Mac
iMac Hard Drive Recovery - Sidee inuu ka soo kabsado files lumay ka Hard Drive on iMac
Hel u dhigma Best iMoive u Mac (Mountain Libaaxa ka mid ah)
Sida loo qabsaday Video ku Mac
Sidee inuu ka soo kabsado ah Barzakh, Lost in Mac
> Resource > Mac > samaysay Back to My Mac iyo Back to My Mac lagu bedelan karo